Mobiles 8 kacha mma n'etiti - Septemba 2021 | Androidsis
Kasị mma n'etiti igwe na-agbagharị agbagharị
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche idozi ekwentị ochie gị ma ị chọghị itinye ya n'ihe egwu site na ịzụta ekwentị dị oke ọnụ ala, mana ị chọghị ịhapụ ka peepe gị n'akpa uwe gị, mgbe ahụ ufọt ufọt nso mobiles bụ ihe kasị mma ohere ibido ọchụchọ na oke nke ọhụrụ gị ọnụ. Agbanyeghị, amaala m gwa gị na mkpebi a agaghị adị mfe, ihe kpatara na-amalite n'echiche Mid-Range n'onwe ya.
N'etiti etiti, dị ka echiche, bụ echiche nke onwe, nke ndị na-emepụta na-ejikwa ọtụtụ ebe, ndị maara na ha enweghị ike iru njedebe ha dị ka njedebe dị elu, na-ezerekwa echiche ndị na-ekwu maka obere njedebe nwere ike ịnwe. Dabere na ntụle ndị a, taa na Androidsis anyị ga-anwa ịwụnye ọkụ iji ghọta ihe etiti etiti ụwa nke telephony, na anyị ga-ewere ohere na-atụ aro iri kasị mma n'etiti-nso mobiles na ị nwere ike ịchọta n'ahịa taa.
1 Kasị mma n'etiti igwe na-agbagharị agbagharị
1.2 Xiaomi Redmi Rịba ama 4
1.3 Na-asọpụrụ 8
1.4 Ọgbọ nke ise Moto G
1.5 Na-asọpụrụ 6C
1.6 BQ Aquaris U Gụnyere
1.7 Ekwentị S7
2 Kedu ihe bụ smartphone dị n'etiti
2.1 Ike na arụmọrụ
2.2 Ogo nke ihe na akụrụngwa
Ka anyị lee ihe ha nwere ike ịbụ ndị kasị mma n'etiti-nso mobiles nke ahịa ugbu a.
Anyị na-amalite na a "ọla" nke n'etiti nso na bụ Huawei P9 Lite, smartphone nke ị nwere ike inweta maka ole na ole 200 € nke ahụ gụnyere 5,2-anụ ọhịa Full HD ihuenyo, isi ihe nhazi asatọ, 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwa dị n'ime, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, igwefoto isi 13 MP na ọkụ ọkụ na autofocus, 8-inch n'ihu igwefoto megapixels, 3.000 mAh batrị nakwa na e ji ígwè mee ya.
Xiaomi Redmi Rịba ama 4
Anyị na-aga n'ihu na otu n'ime ọkacha mmasị m n'etiti ekwentị mkpanaaka kachasị mma, Xiaomi Redmi Rịba ama 4 nke ị nwere ike ịzụta site n'aka ndị na-ere dị iche na Spain maka ọnụahịa dị gburugburu 155-175 euro dị maka ụdị 32 GB, na n'etiti 195-220 euro approx. Maka 64GB nchekwa nchekwa. Nke a Redmi Rịba ama 4 pụtara maka 5,5-anụ ọhịa Full HD ihuenyo, Mediatek Helio X20 processor esonyere 3 ma ọ bụ 4 GB nke Ram na 32 ma ọ bụ 64 GB nke nchekwa na 13 megapixel isi igwefoto na f / 2.0 oghere na ọkụ abụọ LED. Agbanyeghị, nke kachasị mma bụ ya nnwere onwe dị ukwuu 4.100 mAh batrị.
Onye ozo kachasi nma bu Na-asọpụrụ 8 site na Huawei, a ọdụ dị n'etiti etiti dị nso na njedebe dị elu, Ma ọ bụ ikekwe n'ezie elu-ọgwụgwụ? Dịka m gwara gị, akara nkewa ahụ dị gịrịgịrị. Ọ nwere ihuenyo 5,2 nke anụ ọhịa Full HD, ihe eji eme igwe niile, quin-core Kirin 950 (nke emere onwe ya) nke nwere 4 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa ma tinyekwa akara mkpisiaka na igwefoto kachasị 12 megapixel. na elekwasị anya laser nke na-enyefe a elu-nkezi sharpness ka oyiyi iwere na ala ìhè.
Ọgbọ nke ise Moto G
N'ime ndepụta dị ka nke a, ị gaghị echefu ọnụ site na Motorola - Lenovo, ma lee, anyị nwere ya. Ọ bụ ya Ọgbọ nke ise Moto G na 5-inch Full HD screen, Qualcomm Snapdragon 430 processor, 2 GB nke RAM, 16 GB nke ROM, batrị 2.800 mAh, Igwefoto 13 megapixel na gam akporo 7 Nougat dị ka sistemụ arụmọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ejiri aluminom na-egbuke egbuke mere ya kpamkpam nke na-enye ya obi ụtọ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ịnwere ike ịnweta ya naanị euro 190.
Anyị na-emegharị ika n'ihi na ọ bụrụ na mmefu ego gị dị ike karịa, ị nwere ike ịnweta nke a Na-asọpụrụ 6C maka ihe dị ka euro 200 Olee ihe enyemaka, ezi n'etiti etiti na a 5-anụ ọhịa ihuenyo, octa-isi processor, 3GB RAM, 32GB ROM, 3.020mAH batrị, Igwefoto kachasị na 13 megapixel na ahaziri Ansdroid Marshmallow sistemụ arụmọrụ n'okpuru ụlọ ọrụ EMUI nke ụlọ ọrụ ahụ.
BQ Aquaris U Gụnyere
Na Spanish ekpomeekpo anyị nwere BQ Aquarius U Plus, otu n'ime igwe ntanetị kachasị mma nke anyị nwere ike iji mee maka ihe na-erughị euro 200. Ọ nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa Full HD, Snapdragon 430 processor, 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwa dị n'ime, batrị 3.080 mAh iji kwụsị ụbọchị niile na sistemụ arụmọrụ. Android 7.1.1 Nougat na ole na ole ụdị ị ga-ahụ.
Ọtụtụ ihe amachaghị bụ Elephone S7 a, na-enweghị obi abụọ otu n'ime ọdụ ndị ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ ya 5,5-anụ ọhịa Full HD ihuenyo echekwara Gorilla Glass 3, akwa igwe, Helio X20 deca-core processor esonyere 3 ma ọ bụ 4 GB nke RAM na 32 ma ọ bụ 64 GB nke ROM, igwefoto 13 megapixel, autofocus, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, 3.000 mAh batrị na ụfọdụ ndị ọzọ mara mma zoro ezo nzuzo. Pricegwọ ya? Nwere ike ịchọta ya na Amazon maka ihe na-erughị euro 200.
Anyị ga-akwụsị nhọpụta a nke igwe ntanetị kachasị mma na ihe nlereanya si na South Korea Samsung. Ọ gbasara Galaxy J7, ọnụ na-abịakwute anyị Super AMOLED ngosi 5,5-anụ ọhịa Full HD, onye mere EXYNOS 8890 processor tinyere 2 GB nke RAM na 16 GB nke nchekwa dị n'ime, igwefoto isi 13 megapixel nwere ọkụ LED na atụmatụ ndị ọzọ. Ebe na-esighi ike ya, sistemụ arụmọrụ, gam akporo 5.1.
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, enwere ọtụtụ ọdụ ndị ọzọ dị n'etiti etiti, anyị ga-emelite nhọrọ a ka ngwaọrụ ọhụụ pụtara na anyị ga-etinye. N’ọnọdụ ọ bụla, echefula nke ahụ mobile kacha mma abụghị nke kachasị ọnụ, ma ọ bụ nke kachasị ewu ewu, mana nke kachasị egbo mkpa gị na atụmanya gị.
Kedu ihe bụ smartphone dị n'etiti
Dika anyi kwurula na mbido akwukwo a, tupu anyi ekwuo banyere igwe okwu kachasi nma, anyi aghaghi ighota ma mata ihe etiti di. Dịkwa ka anyị megoro, ahịrị nke na-ekewa etiti etiti bụ ezigbo mkpa na nke onwe.
Ihe mbụ ị ga-ama bụ na enweghi corpus normative nke na egosiputa ihe etiti di (ma ọ bụ elu dị elu, ma ọ bụ obere dị ala) ya mere, mgbe anyị na-ekekọta ọnụ ma tinye ya n'otu ma ọ bụ ọzọ, anyị ga-ahụ akụkụ dị iche iche, gụnyere ike ya na arụmọrụ ya, ogo nke ihe ya yana, n'ezie, ọnụahịa ya , n'etiti ndị ọzọ. Anyị niile doro anya na smartphone nke plastik nke a na-ere ọhụrụ maka euro iri ise bụ mkpanaka ala. N'otu ụzọ ahụ, ọ dịghị onye nwere obi abụọ na ama nke 800 euro, nke e wuru na iko na ọla, nwere anya Leica na 6 GB nke Ram bụ ekwentị dị elu (dị oke elu ma ọ bụ adịchaghị). Ma olee ihe na njirimara na-akọwapụta ngwaọrụ ndị na-adị n'etiti ibe ha.
Ike na arụmọrụ
Kemgbe ọtụtụ afọ, ikike nhazi nke ibe ndị mejupụtara ekwentị anyị na-eto eto, ya mere, ọkwa ike nke mgbawa dị elu otu ma ọ bụ afọ abụọ gara aga, taa ka a na-ewere dị ka etiti. Dịka ọmụmaatụ anyị nwere ike ịkọwa nke ahụ Qualcomm processor 600 Usoro (Snapdragon 660 ma ọ bụ 630, n'etiti ndị ọzọ) ga-ederịta akwụkwọ ozi n'etiti etiti dị ugbu a, ikekwe na 2018 ma ọ bụ 2019, ha ga-abụrịrị ndị na-arụ ọrụ dị ala. Ọnọdụ a na ndị nrụpụta processor ndị ọzọ dịka Mediatek (nke a na-ejikarị na igwe eji eme ihe n'etiti), Exynos (nke Samsung chịkọtara) ma ọ bụ HiSilicon Kirin nke Huawei gbakọtara.
Ogo nke ihe na akụrụngwa
Ikekwe, onye ọ bụla anyị jụrụ ga-aza anyị ngwa ngwa na smartphone nwere casing plastik bụ ama amamịghe adịghị mma, mana nke a abụghị mgbe ọ bụla, ọ bụghịkwa ya bụ naanị ihe na-etinye aka na nke a n'ihe gbasara ogo nke ihe ndị ahụ. . Mgbe anyị na-ejikọ ụfọdụ ihe na ndị ọzọ, anyị ga-ahụ ihe ndị ọzọ, mana enweghị mgbagha ọ bụ ogo nke ihe ndị na - eme ka ọdịiche kachasị dị n'etiti etiti dị ala, ọkara na elu nke igwe. Ke ofụri ofụri, mgbe elu-ọgwụgwụ mobiles iji metal na iko na-echebe site Gorilla Glass fọrọ nke nta na-enweghị isịneke, ke ufọt ufọt mobiles anyị ekwesịghị iju anya ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ụdị na plastic ụlọ na iko onye nche bụ ike ọgwụgwụ.
Ihe yiri nke ahụ na - eme na ngwa ndị ọzọ nke ekwentị mkpanaaka dịka ogo ha ma ọ bụ asambodo nke iguzogide ájá na mmiri (n'ozuzu, ọ na - apụta ma ka mma ka anyị na - arịgo na nso), ogo igwefoto ma ọ bụ ọnụnọ nke ihe mmetụta. mkpịsị aka mkpịsị aka, na mbụ echebere maka njedebe dị elu ma ugbu a dị n'ọtụtụ dị iche iche nke igwe ntanetị.
Ahapụrụ m nke ikpeazụ akụkụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile na-eche na mbụ mgbe ị na-ahazi ekwentị nke (ma ọ bụ mbadamba, ma ọ bụ laptọọpụ, ma ọ bụ telivishọn ...): ụgwọ. Dịka anyị ga-etinye ala na uko ụlọ, anyị nwere ike ikwenye nke ahụ Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe ojii niile nwere ọnụahịa mbido dị n'etiti euro 150 na 250 (ọ bụ ezie na nhazi ndị ọzọ zuru ezu ga-enwe ọnụahịa dị elu) ọ bụ ezie, n'ezie, enwere ndị ọzọ, ma elu na ala. Na-enweghị ịbanye ọnụego mgbanwe, ma ọ bụ nkwalite ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, onye nrụpụta ọ bụla nwere ike itinye ngwaahịa ha na ọnụahịa ha chọrọ, ya mere, na ekwentị na-amalite site na ọnụahịa nke euro 300 maka ụdị dị iche iche ya apụtaghị na ọ ga-adị elu , dị ka ekwentị 100-euro na-agaghị adị obere njedebe naanị maka ọnụahịa ya. Iji chọpụta isi okwu a, anyị ga-enyocha akụkụ dị ka ndị a kpọtụrụ aha n'elu: ogo nke akụrụngwa, akụrụngwa, ike, wdg.
Ya mere, ka anyị ghara ileghara eziokwu ahụ bụ na akọwapụtaghị etiti etiti ahụ site n'akụkụ ndị dị n'elu akọwapụtara iche, mana kama anyị kwesịrị inwe nnyocha iji chọpụta na ekwentị mkpanaka bụ akụkụ nke etiti, ma ọ bụ ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kasị mma n'etiti igwe na-agbagharị agbagharị
Ezigbo ndepụta Jose, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-efu, dị ka:
- Sọpụrụ 6X adịchaghị
- Moto G5s gbakwunyere
Zaghachi na NewEsc
Ngwa ngwa ihu igwe OnePlus dị ugbu a na Playlọ Ahịa Play
Nwere ike nweta Snapk Spectacles gị na Amazon